hoo!haa!! – Page 9 –
Ilu maka Ehi
Asọmmpi Ilu nke taa bụ maka EHI Chetakwanụ Iwu Asọmmpi Ilu hoo!haa!! 1. Asọmmpi na ebido n’elekere iri na otu nke ụtụtụ kwụsị n’elekere iri na abuọ nke abali 2, Onye atụla nke ibe ya tụrụRead More →
Ụmụ ntorọbịa ndi Igbo kpọrọ onwe ha ‘Igbo Youth Movement’ ekwuela na ọbị dị ha mma ugbu a ndi ụlọ omebe iwu Naijiria hụrụ ihe ndi Igbo jiri jụ kpam kpam, ibinyere onye isi ala bụ Muhammadu Buhari aka na nhọpụta nke afọ puku abụọ na iri na ise. NdiRead More →
AMAALA NDI GBURU ỤKỌCHUKWU NA BENUE IKPE ỌNWỤ
Ụlọ ikpe ukwu anọrọla na Makọdị bụ isi steeti Benue maa madụ abụọ bụ ndi gburu ụkọchukwku Jọn Adeyi ikpe ọnwụ. Aga-akwụgbu ha akwụgbu. Mgbe ndi ezi n’ụlọ ụkọchukwu ahụ nụrụ ka-esi kee ikpe ọnwụ a, ha kwuru na ọbụ ikpe mkwụmọtọ ka ụlọ ikpe a kere. Ọbụ ụnyahụ bụRead More →
NDI OTU ROTARY KWANYERE UGWUANYỊ UGWU.
Ndi otu ọga n’ihu na-adị mma n’ụwa niile bụ Rotary International ngalaba nke 9142, Naijiria nọrọ n’isi nso a jaa aka na-achị steeti Enugu bụ Ifeanyị Ugwuanyị ike ma nye ya onyinye nke ùgwù maka ọchịchị ya bụ ịgba. Anọrọ n’emume ịkụ ngaji n’eze ekpokọbara maka onye ọchịchị a kwanyereRead More →
MBAKA AGWALA BUHARI KA Ọ GAA ROM GA RỊỌ MGBAGHARA
Otu ụkọchukwu ndi nzukọ Katọlik so na ndi okwu ha na-ada ụda na ntị Chukwu, ma bụrụkwa onye ntụzi aka ụlọ ekpere a kpọrọ ‘Adoration, Ministry Enugu Nigeria, bụ Rev. Fr. Ejike Mbaka adọọla onye isi ala bụ Muhammadu Buhari nakwa ndi ọrụ omebe iwu aka na ntị maka nnukwuRead More →
Ụlọ omebe-iwu sineti agwala ndi nche ahụ gbara ebe obibi osote onye isi ụlọ omebe iwu ụlọ sineti, bụ Ike Ekweremadụ okirikiri ka ana achọ ya njide, n’Abụja, ka ha si n’ebe ahụ pụọ, ka nwa-amadị a nwee mmegharị ahụ. Ọ bụ onye omebe iwu bụ sinetọ Chukwuma Ụtazi kpọlitereRead More →
http://image, Ike ekweremadụ Ụlọ omebe-iwu sineti agwala ndi nche ahụ gbara ebe obibi osote onye isi ụlọ omebe iwu ụlọ sineti, bụ Ike Ekweremadụ okirikiri ka ana achọ ya njide, n’Abụja, ka ha si n’ebe ahụ pụọ, ka nwa-amadị a nwee mmegharị ahụ. Ọ bụ onye omebe iwu bụ sinetọRead More →
ONYE FULANI NA-EKWUSA OZI ỌMA KRAIST.
Onwere ihe onyonyoo (vido) nke na-agagharị n’ikuku ugbu a, bụ ebe otu onye amala Fulani na-agbasa ozi ọma banyere Jesu Kristi. N’okwu Chukwu ya, nwoke a na-ezi ozi ọma banyere Jizọs bụ onye ọ sịrị na ya kwenyere na ya dịka otu ụzọ mmadụ pụrụ isi n’ime ya wee nweeRead More →
Osote onyeisi Sineti Ala anyị bụ Ọkammụta Ike Ekweremadụ ekwuola hoo!haa!! na ọ bụ usoro ọchịchị ịkpa oke na mmegbu e jiri mara Onyeisiala Buharị kpatara akpọmasị, ọgbaghara nakwa ịkwafu ọbara jizi arị ibe ya elu na Naịjiriya taa. Ọ kọwara na ọ bụ etu Buharị siri kpọọ ekwo nkụRead More →
EWURead More →
Site na nrụgharị ahụ arụgharịrị ụzọ ochie ahụ bụ Ugwu Mịlịkịn, sitere Enugwu pụta ngwoo ma garue Naint Mail-Kọna, aka na-achị steeti Enugwu bụ Ifeanyị Ugwuanyị etinyela ọchị n’ọnụ ndi steeti Enugwu. Arụgharịrị ụzọ ahụ n’ụdị ọgbara ọhụrụ, tinye ya ọkụ okporo ụzọ n’ụmụ ihe nchekwa ndi ọzọ. Ọbụghị naanịRead More →
Ndi Igbo, mma mma nụ. Ọ dị m nnukwu nwute na ọtụtụ mgbe, ọtụtụ ụmụ Naijiria na-ebe akwa maka nnukwu ihe nhịa ahụ dị n’ala anyị ugbu a. N’ime ibe akwa ndi a, onye ọbụla na-atụ aka atụgara gọọmenti nke ala anyị, nke steeti nakwa nke okpuru ọchịchị ime obodoRead More →
Ilu taa ga ekwu maka oke ochịchọ
ụlu nke taa ga abụ agbasara Ilu Igbo Na-Ekwu Maka Oke ỌchịchọRead More →
ANỤRead More →
Ilu Igbo Maka Ndị Umengwụ
Ilu Igbo amaka kwanụ, o nweghị ihe ma ọbụ okwu a ga-ekwu maka ya, agaghị ahụ ilu a ga-eji kwuo maka ya. Tata anyị ga-ekwu maka ilu gbasara ndị umengwụ ndị ji ngana egbu onwe ha.Read More →
I lezie anya, ihe ndị ụfọdụ na-eme mgbe Chukwu Abịama kechara elu na ala, anaghịkwa emezi oge ugbua. Eleghị anya, n’ihi oke ọchịchọ na ka ahụtachaa ndị mmadụ. Ndị Igbo kwuru ya hoo haa na ọ bụ ka ahụtachaa ka mgbọ ji atụ enwe n’isi. Na mbụ, ịrị elu bụRead More →
Ụmụ afọ steeti Abia na Imo bi n’Enugu kpọrọ onwe ha “Abia/Imo People’s Forum” ekwuela hoohaa, na ha chọrọ ka aka na-achị steeti Enugwu bụ Ifeanyị Ugwuanyị chịrị steeti Enugwu gawa n’ihu. Ha sịrị na nke a bụ maka na Ugwuanyị nwere ọchịchị bụ ịgba nke mere ka udo na-achịRead More →
MGBANWE PỤRỤ IMALITE N’EBE Ị NỌ
8 N’isi nso a ka hoohaa nọ na mkpagharị wee zọbanye ụkwụ n’ebe ndi ahụ ji otu afọ efe ala nna anyị nọ. Anyị chọpụtara na o nwere otu nwagbogọbịa yi akwa njiri mara nke ọ pụrụ iche. Nwagbọgọbịa a nke ekwughị aha ya ma bụrụkwa sọ mma jụrụ jụwaaRead More →
NDI NCHỊ EHI EGOSILA ỊTỤ N’ANYA HA NA MKPEBI NDI ỌDỊDA-ỌWỤWA ANYANWỤ
Otu jikọrọ ndi nchị ehi Fulani akpọrọ Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria (MACBAN), ngalaba nke Ọdịda-Ọwụwa anyanwụ Naijiria, egosila ịtụ n’anya ha gbasara mkpebi ahụ ndi aka na-achị steeti ise dị na mpaghara Ọdịda-Ọwụwa anyanwụ nọrọ kwue na ha ekwetaghị ka ehi ha na-ata nri ka o siRead More →
NWIKORỌBỊA EBERELA UTU ONYE UWE OJII
<img src="http://www.hoohaa.com.ng/wp-content/uploads/2018/07/knife_blood_splash-300×123.jpg" alt="" width="300" height="123" class="alignnone size-medium wp-image-1942" / Otu onye uwe ojii ji ọkwa nspektọ ka nwikorọbịa dị afọ iri na atọ bepụrụ utu ya na steeti Katsina mgbe ọ chọrọ idina ya na obodo Tudu Markabu di n'okpuru ọchịchị ime obodo Faskari. Mgbe otu onye achọghị ka-akpọọ ahaRead More →